DHEGEYSO-Wasiirka amniga Puntland oo dalka ku soo laabtay kana kahadlay arrimo muhiim ah. – Radio Daljir
Febraayo 14, 2017 9:27 g 0
Boosaaso, Feb 15 2017-Wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa maanta yimid magaalada Bossaso kadib markii muddo 5 bilood ah uu arrimo caafimaad ugu maqnaa dalka Hindiya.
Wasiir Qarjab, ayaa ka mid ahaa masuuliyiinta la socday meydka madaxweynihii hore ee Puntland Gen. Maxamuud Muuse Xirsi Cadde oo maanta gelinki hore laga soo jediyey garoonka diyaaradaha ee Magaalada Bossaso kadib markii Arbacadii todobaadkii hore uu ku geeriyooday dalka Iskutagga Imaaraadka Carabta.
Cabid Xirsi Cali Qarjab, wasiirka amniga Puntland ayaa markii uu maanta yimid Bossaso wareysi gaar ah siiyey Radio Daljir, isagoo ka warramay xaalkiisa caafimaad ee xilligaan sida uu yahay, sidoo kalena ka hadlay amniga Puntland iyo arrimo la xiriira nabadgalyada.
Cabdifataax Cumar Geeddi oo wasiirka wareystay ayaa marka hore waydiiyey haatan xaalkiisa caafimaad sida uu yahay.